Izindaba - Ubunjiniyela bezitshalo ezinkulu ezixuba ukuthuthukiswa okuluhlaza okokuqondisa okusha okuxuba isitshalo sefektri ukuthengisa ngqo
Ubunjiniyela bezitshalo ezinkulu zokuxuba ukuthuthukiswa okuluhlaza okokuqondisa okusha okuxuba isitshalo sefektri ukuthengisa okuqondile
Ubunjiniyela bezitshalo ezinkulu zokuxuba ukuthuthukiswa okuluhlaza okokuqondisa okusha okuxuba isitshalo sefektri ukuthengisa ngqo
Inkomba entsha yokuthuthukiswa okuhlakaniphile nokuluhlaza kobunjiniyela bemishini yokuxuba emikhulu. Ebhekene nezinguquko ezisheshayo esimweni samanje, imboni yokuxuba emikhulu yobunjiniyela nayo ibhekene nezinguquko ezihambisanayo. Kulezi zinsuku, ngokusheshisa kokwakhiwa kwamadolobha nokwasemakhaya, isidingo semishini ekhonkolo sinyukile. Kodwa-ke, kunemishini ekhonkolo engapheli emakethe, futhi ikhwalithi yabo ayilingani nakakhulu. Phakathi kwale mikhiqizo, sekuvele kukhona eminye imikhiqizo enezinga elithile le-automation, ukunemba okuphezulu kwesisindo, ikhwalithi yesiteshi sokuxuba, kanye nokutshalwa kwemali okuphansi. Kepha ngasikhathi sinye, kukhona nabanye abakhiqizi abaheha abathengi ngamanani aphansi, futhi nemingcele yezobuchwepheshe yemishini ihlale ezingeni lendabuko.
Okokuqala, ngokuya ngokunemba kwemishini. Ukunemba kwemishini yesitshalo yokuxuba emikhulu kubonakala ikakhulu ezicini ezine zokuhlanganiswa, usimende, ukuxubana namanzi. Kuma-aggregates, ukunemba kuvame ukulawulwa cishe ngo-2%, usimende cishe u-1%, ama-admixtures ngokuvamile angaba ngu-1%, futhi ukunemba kungu-1%. Kuma-aggregates, ama-hoppers anesisindo nezikali zebhande kuvame ukusetshenziselwa ukukala. Izikali zeBelt imvamisa zinesisindo esiqoqekayo, futhi ama-hopper enesisindo ahlukaniswe aba nesisindo sokuqongelela nesomuntu ngamunye. Isisindo sikasimende neminye impushana nayo ihlukaniswe yaba izindlela ezimbili: isisindo somuntu ngamunye nesokuqoqeka. Izithasiselo zehlukaniswe ngezindlela ezintathu zokulinganisa: i-volumetric, mass, ne-pulse ngokusho kwezithasiselo ezahlukahlukene. Okamanzi, kubuye kuhlukaniswe ngezindlela ezimbili zokulinganisa, okungukuthi i-volumetric nesisindo. Ukuqinisekisa ukunemba kwezinto zokusetshenziswa kuyisihluthulelo sokukhiqiza ukhonkolo wekhwalithi ephezulu wezentengiselwano. Uma ukunemba kwemishini kuthuthukisiwe, imishini ngokungangabazeki iyoba namandla ngokwengeziwe.
Okwesibili, ezitshalweni ezinkulu zokuxuba, inhloso enkulu ukukhiqiza ukhonkolo wekhwalithi ephezulu wezentengiselwano. Ngakho-ke, ukukhethwa kwezinto zokusetshenziswa kubaluleke kakhulu. Ngezidingo eziqina ngokuqinile zemishini eluhlaza, ukukhethwa kwemishini eluhlaza nakho kuthintekile. Ngokuphathelene nezithasiselo, izinsalela zemfucumfucu eqinile yezimboni efana ne-fly ash, i-slag, i-slag yamanzi, ne-calcium carbide slag kufanele isetshenziselwe ukufaka esikhundleni sokusetshenziswa kokucubungula kwezigayo zakudala eziyimpuphu ezikhethekile. Okwesibili, ngokwezinto ezihlanganisiwe, izimboni ezihlobene nazo zingasetshenziswa futhi ukusebenzisa izinsiza ngokugcwele nokufeza inhloso yokongiwa kwemithombo.
Ngaphezu kwalokho, ukulawulwa kwemishini yezitshalo ezinkulu zokuxuba kufanele kwenziwe ezinye izinguquko ukufeza ubuhlakani obubanzi futhi ngaleyo ndlela kukhulule abasebenzi. Ngokuthuthuka kwezikhathi, imishini ezenzakalelayo ngokuphelele ayinakugwenywa. Uma ufuna ukugcina indawo embonini yemishini kakhonkolo, ukwenziwa kwabantu nobuhlakani bohlelo lokulawula kubalulekile.
Isistimu Yokulinganisa Yokuhlanganisa Okuhlanganisiwe, Isistimu Yokuqoqa Okuhlanganisiwe, I-Automaticaggregate Batching Umanyolo Wokuxuba, Izingxenye Zokukhonkolo Ezihlanganisiwe, Okuzenzakalelayo Isilinganiso Batching Machine, Okuzenzakalelayo Aggregate Batching System,